Iwe Uri A 'Kuona' Kana Iyo 'Intuitive' Hunhu Type? Tsvaga Pano. - Pfungwa
Imwe yeaya mana madichotomies eiyo Myers-Briggs Type Inventory ndeyekuti pakati pekuona uye intuition. Kana iwo mamodheru ari echokwadi, saka ruzhinji rwevanhu runozendamira zvakanyanya kune imwe kana imwe yehunhu hunhu.
Vanopa chero S (yekunzwa) kana N (yeiyo intuition) muzvidimbu zvina-zvehunhu zvemhando yega yega yeMyers-Briggs. Mune mamwe mazwi, iwe unogona kunge uri XSXX kana XNXX apo imwe neimwe X iri zvakare rimwe remavara maviri (atisingazopinde muno).
Asi ndeupi musiyano uripo pakati pehunhu uhu mbiri? Chii chinoita iwe sensor inopesana neyakajeka? Ngationgororei, zvakadzama, nzira idzo mhando yega yega inobatana nenyika yakavapoteredza.
Vaya vane hunhu hunotongwa neiyo sensing nzira vanozivikanwa sema sensors.
Ivo vanorarama hupenyu hwavo pakati peicho chaicho, kongiri uye izvo zvimwe, vachishandisa avo mashanu epamoyo epfungwa kuti vaone kuti yavo mamiriro ezvinhu uye nemabatiro akanaka ekuita mairi. Ivo vanonyatso kuziva nezvekwakapoteredza kuvonga, muchidimbu, kune kwavo kufunga kwepfungwa mune ino nguva. Ivo chaizvo vanonwisa zvese zvakavakomberedza kuti vape yakanakisa chikuva kubva kwavanotora nhanho yavo inotevera.
Ivo vanoisa yakanyanya kukosha kukosha pane ruzivo uye vanotsvaga kuwana yakawanda yayo sezvinobvira vasati vaita sarudzo. Ivo vanoshandisa izvi chokwadi uye ruzivo kuverenga iyo inoshanda nzira yekuita.
Sensors zvakare inosimbisa kukosha kwechiitiko uye ruzivo. Kwavari, zvakapfuura dhatabhesi rizere nezvidzidzo zvakadzidzwa uye huchenjeri kwavanogona kutora.
Zvese izvi zvinhu zvakasunganidzwa mune yavo yekuita sarudzo maitiro ayo anowanzo kuve akaenzana chaizvo mukugadzirwa kwayo. Vanosarudza nhanho-nhanho-shanduko kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe nenzira isina kumbopunzika yekufamba. Iwo akaenzana ejoin-the-dots dambanemazwi, kushanda kubva kune imwe poindi kuenda pane inotevera, kuitira, kugadzirisa dambudziko.
apo pasina hukama hwepedyo muhukama
Maseru anonyanya kukunda pakurangarira huwandu hwakawanda hwechokwadi uye manhamba ayo anowanzovabatsira kuti vabudirire musainzi kuchikoro. Kudikanwa kwavo kwekurongeka chinhu chinowanzo kuve chinoonekwa pavanopinda munyika yebasa uye chinovaita nhengo dzinokosha kwazvo dzechikwata.
sei ndichizviisa pasi
Vashandirwi vanozokoshesa kuda kwavo kutora matanho nekukurumidza uye nekukurumidza.
N Ndeye Intuition
Ivo vanogara zvakatsiga pamagumo eiyo intuition yeiyo spectrum vanozivikanwa se intuitives.
Pfungwa dzavo dzinosarudza nyika yezvisipo, zvakakwana, uye zvisina chokwadi. Ipo ivo, zvakare, vachiwana ruzivo kubva kune kwavo kwepfungwa, ivo vanowanzorega kuvatora ivo chaiko kukosha. Panzvimbo iyoyo, ivo vanofunga nezve izvi zvinoshandiswa kuti vaongorore zvazvinoreva kukosha uye kukosha uye 'kunzwa' zviri kupoteredzwa nenzvimbo yavo.
Kwavari, chakanyanya kukosha iwo mufananidzo muhombe uye havazorega zvidiki zvidiki zvichipinda munzira yekuona kwavo kukuru kweramangwana. Nezveramangwana ndipo panoperera pfungwa dzavo nguva zhinji - ivo vanorota, ivo vanogadzira, uye vanofungidzira mikana yakawanda iri pamberi.
Kana vachida kutora danho, ivo vanozoedza kuenda kune chinzvimbo kwavanogona kuona zvakanyanya sezvinobvira (kutaura kwepfungwa). Kubva pano ivo vanozoedza kuwana kunzwisisika kwekubatana kwezvose zvinofamba zvidimbu uye voshandisa tarenda ravo rekutarisa mapatani kuti vabatsire kutungamira ura hwavo kunzwa. Ivo havana kunyanyo kujoina-iyo-madhi, asi zvakanyanya kutwasuka kubva A kusvika Z.
Ma Intuitives akanaka pakuwana kubatana pakati pemaonero maviri anoita kunge akapatsanuka mazano kana pfungwa uye nekuvaunza pamwechete kuti vagadzire nzira itsva dzekufunga. Izvi zvinovaita vane hunyanzvi hwekugadzira, kazhinji vanhu vane hunyanzvi hwekufungidzira uye kuona.
Iyi imwe nzira yepakutanga yekufunga inovapa yakanakisa kugadzirisa matambudziko uye ivo vanowanzo kuverengerwa nehunyanzvi uhu mukati memakore avo echikoro uye kana vari pabasa. Kukwanisa kwavo kuona mafambiro kwazvino unoitawo kuti vakoshe zvakanyanya mune mamwe maindasitiri uko kunoenderana nechero rekucheka kwakakosha.
Intuitives dzimwe nguva inoda nguva yekufungisisa vasati vatora danho, asi yavo yekufungisisa inovapa fungidziro isingadzorwe iyo inouya inobatsira kana hunyanzvi huchidikanwa.
Inoenderana posvo (chinyorwa chinoenderera pazasi):
Iwe Uri A 'Kutonga' Kana 'Kuona' Hunhu Hwudzi?
Uri Iwe 'Unofunga' Kana 'Kunzwa' Hunhu Hwudzi?
Nzira 14 dzekunatsiridza Teerera kune Yako Intuition
4 Zviratidzo Iwe Uri Intuitive Empath (Kwete Ingori Impath)
22 Zvinyorwa Pane Intuition Kubatsira Kuchengeta Iwe Uchikurukura Neyako
Kana Ss naNs Vakabatana
Izvozvi zvatakatarisa nzira dzakasiyana nema sensors uye intuitives, ngatitarisei kune zvinoitika kana vachifambidzana.
Panogona kuve nekuratidzana kuri pachena kwehunhu kana vaviri vakauya vakatarisana. Semuenzaniso, panonzwa masenenzi ekuti intuitives yekugara mune gore-cuckoo nyika, ma intuitives anoona maseru seasina kufunga.
Kana sensor ikatarisa pane inonzwisisika, iye anoona zvishuwo zvisingaiti, maitiro akaomesesa ekushanda, uye fungidziro fluff isingagone kuitiswa.
Zvakare, iyo inonzwisisika inoona senzwi seisingagadzirike shanduko, inokurumidza kuita, uye inokoshesa chokwadi pane manzwiro.
Intuitives inogona kunzwa pfungwa yekukwirira kupfuura vamwe vavo veavo sensor nekuti ivo vanokwanisa kupaza pasi nenzira inoitwa zvinhu. Ivo vanoona kwavo-kwe-kwe-mubhokisi vachifunga setarenda ravo repamusoro uye iro rakakosha kwazvo kupfuura chero chinhu chinogona kupihwa neanonzwa.
Maseru anokakavara kuti kunyangwe hazvo zvakanaka kuva neaya mazano, ma intuitives anoshaya hwaro hwekuisa mazhinji acho mukuita. Vachati kana zvinhu zvichida kuitwa, maitikitivhiti hapana kwaanoonekwa, uye kuti dai asiri ivo, nyika yaizomira kumira.
mukomana anotarisa zvakanyanya mumaziso angu
Maitiro Ekuita Neako Anopesana
Kunyange nhamba dzakasiyana dzakapihwa yekuparadzanisa pakati pe sensors uye intuitives, hazvirambike kuti pasirese pane nhamba hombe dzese dziri mbiri. Izvi zvinokumbira iwo mubvunzo, saka, nezvekuti iwe unoenda sei nezvekutaurirana nemunhu werumwe rudzi.
Zvakanaka, zvinogona kuve zvinonyengera kuita, asi mhinduro yacho iri pachena: kana iwe uchida kuwana zvakanakisa (kana pane zvaunoda) kunze kwako, unofanirwa kuratidza zvinhu nenzira yavachanzwisisa.
Mune mamwe mazwi, zvisingabatsiri sezvazvinogona kuita kwauri, edza kufungidzira kuti sensor yako kana shamwari inonzwisisika ingapindura sei zvakanaka kune chikumbiro chakati. Seta iwo mapoinzi iwe auri kuyedza kuita nenzira iyo ivo vanonzwisisa zviri nyore uye nekugona kugadzirisa. Zvinonzwa sekune dzimwe nyika pakutanga, asi kana iwe uchida kuti vaone zvinhu sezvaunoita iwe, unofanirwa kushandurira mutauro wako mumutauro wavo.
Semuenzaniso, ma intuitives aigona kuyedza kuenzanisa pfungwa dzawo mumaonero ekongiri akazara nekusaswa kwechokwadi nekuenderera.
Maseru, kune rimwe divi, anogona kuyedza kukurukura zvaari kuita maererano nezvazvinoreva kumufananidzo wakafara pane kubatikana mune zvakadzama.
Chaizvoizvo, iwe unofanirwa kushandira kune ako simba kana uri wega (kana nevamwe vorudzi rwakafanana), uye edza kushanda nesimba ravo kana uine mumwe wako.
Mhinduro pfupi haina. Muzvokwadi, nyika inoshanda sechinhu chakabatana, muunganidzwa wemastaera uye nzira dzinosanganira muvanhu vanofambira mberi, asi vanoshanda vatinogara mairi.
Iko hakuna mujaho pakati pe sensors ne intuitives, asi asi mutambo wechikwata uko vanokunda ndevaya vanogona kushanda pamwechete, kunyangwe paine misiyano, kuzadzisa zvinhu zvikuru.
sei kupa mukomana nzvimbo
Uye kunyangwe iri dichotomy mune dzidziso, isu tese tine maficha ekufunga uye nekuziva mukati medu, uye tinovimba nazvo kune akasiyana akasiyana zvichienderana nezvatiri kuita, vatinaye, uye kunyangwe chikamu chipi chehupenyu hwedu isu vari mu.
Saka iwe unofanirwa kukumbundira imwe neimwe sekunge zvipo zviviri zvakakosha zvawakapihwa.
Iwe unonyatso tarisa zvakanyanya se sensor kana intuitive? Siya zvaunotaura pazasi uye ugovane zvawakamboona nevamwe vemarudzi ese.
chii chinonzi rudo rwemweya
murume paanosiya mhuri yake
inzwa wakasununguka muganda rako pachako
udza zvinhu zvese zvaunoda
zvekuita kana iwe uchinetseka mukati
mangani madheti usati wafunga kuti haazi machisi